Qabsada Xariga Eebbe dhammantin, hana kala taginina! ~ Qur’an:03:103
Home /Blog/Qabsada Xariga Eebbe dhammantin, hana kala taginina! ~ Qur’an:03:103
Guud ahaan Dadka waxaa dhalay Hal Aabo iyo Hal Hooyo oo ahaa Nabi Aadam (CS) iyo Xaaskiisii Xaawa (CS), Intooda Eebbe rumaysay oo raacday Ergadii Xaggiisa ka socotayna waxaa la oran jiray/yiraahdaa Muslimiin ama Mu’mimiin “Kuwa Eebahood isu dhiibay ama rumeeyay”.
Waxaa jiray Ummado badan oo aan Ruuxna ka raacin Ergadii loosoo diray, Qaar Qof Qof ayaa ka raacay, Halka qaar Nabigeenii Muxammad (CSW) uu ka mid ahaana ay ka raaceen Dad Ciiddaas iyo Farahaas ka badan oo aan Tiro lahayn.
Ummadaha inta Ergayga loosoo diray uu dhex joogo way iksu duubnaan jireen, laakiin marka uu dhinto ayay baalmari jireen Wixii wanaagsanaa oo uu uga tagay, Iyagoo markaa Diintii ka noqon jiray ama Wax weyn ka badali jiray sidii dhabta ahayd ee loosoo dajiyay. Taasaa marka keeni jirtay in uu Eebbe ucaroodo oo ka aargoosto oo la mariyo Abaalmarinta Wixii xumaa ee ay sameeyeen. Waxaa markaan Eebbe mar kale soo diri jiray Ergay kale oo Halkii kasii wada Farriintiisii.
Waxay socotaba, waxaa lasoo gaaray in Eebbe udoortay Nabigeena Muxammad (CSW) (oo ahaa Kan ugu dhow Eebbe uguna wanaagsan xaggiisa Waxa uu abuuray) in uu noqdo Ergayga ugu dambeeya Ergadii tirada badnayd ee kala dambeeyay ee uu Aadanaha usoo diri jiray, si ay ugu sheegaan Waxa Eebahood doonayo, ugana digaan Waxa uusan doonayn. Sida Nabi Muxammad uyahay Ergayga ugu dambeeya ayay Ummaddiisuna utahay Ummadda ugu dambaysa Aadanaha.
Sida aan Taariikhda ku hayno Kala aragti duwanaanta, is-afgaran waaga iyo is-maasndhaafka Ummadda Nabi Muxammad (CSW) waxay soo bilaabatay isla markii Nabiga Ruuxdiisu ay aadday Xaggaas iyo Eebeheed, taasoo markii dambe isku rogtay Gacan ka hadal iyo Dagaalo ba’an oo Kharaar oo ilaa Maanta holcaya!
Maalin kasta waxaa soo kordhaysay Koox cusub oo ku baaqaysa in ay Dadka Diinta ku dhaqayso, tahayna Kooxda kaliya ee haysata Wadadii Tooska ahayd ee Eebbe dhigay!
Kooxahaas waxaa ugu waaweyn kuwa lakala baxay SUNNI IYO SHIICO oo midba kan kale gaalaysiinayo Dhiigoodana bannaysano, iyadoo Koox kasta usii kala baxdo Boqolaal kale oo aan Midba Midda kale la tukan!
Waxaad mooddaa in Muslimiintu Maanta marayaan Halkii ay Masiixiyiintu marayeen markay Kaniisadoodii kala qaybsantay oo ay kadibna sida ba’an isu laayeen!
Kooxahaas markaad hooshoos uwaraysatid oo aad tiraahdid ma jirtaa Wax mideyan kara Ummadda Musliniinta ah!? Mid walba waxay oranaysaa: “Nabiga ayaa horay usii sheegay in Ummaddiisu Dhowr iyo Todobaatan Kooxood ukala bixi doonto Hal Kooxina Jannada ka gali doonto…!”. Markaad tiraahdid waa Kooxdee? Waxay kuu sheegayaan Hadal Nabiga loo tiiriyo oo inta hore isaga eg laakiin gadaal Qolo waliba Meeshay doonto la aaddao! Hadalada Kooxahaas kala duwan mid kasta waxaad ka dhadhansan kartaa haddaysan toosba kuu oran in ay isu haystaan in ay yihiin Kooxda kaliya oo toosan ee Nabigu sii sheegay! Anigu waxaan is iri hadduu jiro in Hadalkaas Nabigu yiri, wuxuu ula jeeday Digniin ah: “HA UKALA TAGINA SIDAY UMMADIHII HORE UKALA TAGEEN!”.
Marka toos loogu dhabba galo Kooxahaas kala duwan waxaad arkaysaa in Ujeedkooda weyni yahay in ay Talada Ummadda Gacanta ku dhigaan iyo in ay abuuraan Hodontimo Adduun, waana Wax toos uga soo horjeeda Waxa ay ku baaqayaan! Hadday Meesha Lillaahi-nimo taalo inta ay wadaagaan oo ay ugu waaweyn yihiin Rumaysnaanta Eebaha weyn, Nabigiisa iyo Farriintiisa (Qur’aanka) ayaa ka badan inta ay ku kala duwan yihiin ee ay ku daba socdaan Aragtiyo iyo Dadaalo Maskaxdooda ah oo ay bixiyeen Dad Iyaga oo kale ah oo Sax iyo Khaladba noqon kara!
Arrintaas waxaad ka arki kartaa Hadalada Dadka Caadiga ah kugu oranayaan Maalin kasta oo ah: “Maxaad Dhaqdhaqaaq-Diimeed ugu biiri weyday si aad uheshid Magac, Muunad, Maamuus iyo Middii la isku jeclaaba, Maanta Qofkii aan Mid uun ka mid ahayni waa bakhtiyayaaye!?”
Hadal iyo dhammaanti, Anigu sida aan qabo haddii si Maskax furnaan ah loo eego Dhaqamada Ururadaan Diimeed ee tirada beelay, horta waxaa la hubaa in giddigood ay yihiin Kuwa la sameeyay Nabiga gadaashiis, waxa la isku hayana ay tahay Aragtiyo ay keeneen Niman Wadaado ah oo saamayn ku yeeshay Dadkii Caamada ahaa, ee aan la isku hayn Arimaha Salka iyo Seeska u ah Islaamnimada!
Waxaa kaloo la hubaa in aysan wada gafsanayn ee mid walba Wax uun ka haysto Diintii Saxda ahayd. Taasi waxay na galinaysaa Yididiilo ah in Islaamku jirayo haba la kala aragti duwanaadee.
Annaga Dadweyne ahaan waxaa nala gudboon in aanan lakala safan Kooxahaas kala duwan ee aan Waxa ay isaga mid yhiin ka qaadano, Waxa ay ku kala tageena Meel iska dhigno. Sidaas waxaan uleeyahay Lafahayga ayaan ucabsanayaa, waayo Ruux Qabriga ila galaya majiro, sidoo kalana ma jiri doono Mid iiga shaqayn doona ama iiga warcelin doona Imtixaanka isugaya ee Eebbe iga qaadi doono Maalinka Weyn!
Midnimo iyo Israac ayaan u quud-darraynayaa Muslimiinta!
W/Q: C/qaadir Maxamed Nuur
Facebook & Twitter: Abdulkadir M. Nur
Daawo): Sawirro- Madaxweyne Farmaajo oo kulabistay Dharka ciidanka kuna dhawaaqay Dagaal Kadhan Ah Al-shabaab
Deg:deg” Shirkad-da DP World oo la wareegaysa Maamulka Dekad-da Bosaaso Marka ay Dayactirto